Ny tanànan’i Cebu · Global Voices teny Malagasy
Ny tanànan'i Cebu
Voadika ny 31 Jolay 2019 4:23 GMT
Ivelan'ny Nosy Mactan, Cebu. Sary: Georgia Popplewell
Cebu City no tanàna renivohitry ny faritany Cebu ary “tanàndehibe faharoa” ao Filipina. Foiben'ny Metro Cebu, faritra Metropolitana faharoa be mponina indrindra ao Filipina aorian'ny Metro Manila i Cebu City. Manana mponina 866 171 (fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2010). Ivon'ny fifanakalozana ara-barotra, varotra ary fanabeazana ao amin'ny faritra Visayas ny tanànan'i Cebu. Ny Tanànan'i Cebu ihany koa dia fantatra fa “Tanàna Mpanjaka Vavin'ny Atsimo.”
Miorina ao amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy Cebu ny tanàna. Izy io no tanàna Espaniola voalohany ary tanàna tranainy indrindra any Filipina.
Tranonkala ofisialin'ny faritanin'i Cebu
Cebu ao amin'ny Wikipedia
Cebu City ao amin'ny Wikipedia
Cebu ao amin'ny Wikitravel
Fidirana mankany Cebu
Ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Mactan-Cebu (CEB), any amin'ny Nosy Mactan ao an-tanànan'i Lapu-Lapu no mampitohy an'i Cebu amin'ny hafa. Betsaka ireo sidina mivantana isan'andro mankany sy avy any Korea, Singapaoro, Hong Kong ary koa sidina voaomana mankany Japana, Qatar, Malaysia, Taiwan, ary Shina. Mampitohy sidina maromaro mankany Rosia, Shina, Etazonia ary firenena hafa ihany koa tsindraindray ny seranam-piaramanidina.
Ny Mactan Cebu International ihany koa no fihaonan-dalana voalohany ao an-toerana ivelan'i Manila, ary ahitana sidina maro manodidina ny vondronosy Filipina toa an'i Manila, Kalibo, Puerto Princesa, Boracay, Clark (akaikin'ny Angeles City), Siargao (Surigao), Zamboanga, Davao, Bacolod , Iloilo, Cagayan de Oro, Cotabato, Camiguin, General Santos, ary Tacloban, ankoatra ny hafa.
Mety mankany Singapaoro, Hong Kong, Seoul, Kuala Lumpur na Doha ihany koa ireo mpitsidika avy any Amerika Avaratra, Eoropa, Afovoany Atsinanana, sy ny firenena ambiny raha haka ny sidina mankany Cebu. Raha tsy mampaninona anao ny mizaka fitohanana mahatsiravina sy ny kotaba be ao Manila, dia vetivety ianao dia tonga ao Cebu, fa misy sidina 20 mahery isan'andro koa eo amin'ireo tanàna roa ireo na mila ho sidina roa isan'ora.
Eo amin'ny 20-30 minitra ny miala ao amin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny afovoan-tanànan'i Cebu.
Tsy mila visa hidirana ao Filipina mandritra ny fitsidihana tsy mihoatra ny 30 andro ny olom-pirenena avy amin'ny firenena 157, saingy tsy maintsy manana tapakila miverina sy pasipaoro manan-kery mandritra ny enim-bolana farafahakeliny izy ireo. Tsindrio ato raha hijery ny lisitra.
Takiana mba hangataka visa any amin'ny masoivoho Filipiana any amin'ny firenen'izy ireo ireo mpandray anjara izay tsy maintsy mangataka visa Filipina. Azonao atao ny mijery ny lisitry ny masoivoho akaiky anao indrindra ato. Mety haharitra roa herinandro ny dingana, ka ataovy haingana araka izay azo atao ny fangatahana.
Takiana ho an'ny visan'ny mpitsidika ireto manaraka ireto, aza adinoina ny manamarina mivantana ny masoivoho Filipiana akaiky anao indrindra mba hanamafisana raha misy antontan-taratasy fanampiny ilaina, toy ny taratasy fanamarinana vaksiny:
Pasipaoro/Taratasin-Dia manankery enim-bolana farafahakeliny ankoatra ny fahalavam-potoana ipetrahana ao Philippines;
Taratasy fangatahana Visa vita soa aman-tsara ny fametrahana azy;
Saripikan'ny pasipaoro (roa);
Porofon-tsata bona fide (azo itokisana tsara) amin'ny maha-mpizahatany na mpihary (businessman) (mety ho tafiditra amin'izany ny fanamafisana ny fandoavana saram-pisoratana anarana kaoferansa. Vonona rehefa anaovana fangatahana ny taratasim-panekena ofisialy avy amin'ny PCIJ; manorata amin'ny pcij@pcij.org.
Fanamafisana tapakila fiverenana fahavononan-dia mankany amin'ny seranana hafa manaraka; ary
Fandoavana ny saran'ny Visa.
Alaina amin'ny mpandeha rehetra araka izao manaraka izao ny saran'ny Fitodiana:
Dia iraisam-pirenena, PHP550 (manodidina ny US $ 13)
Dia anaty firenena: PHP200 (tokotokony ho $ 3.50 US)
Ny sarany dia aloa ao amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny fotoana fiaingana.
Iray amin'ireo “jeepneys” marevaka ao Cebu. Sary (CC) BY-NC-ND avy amin'i Charles Van den Broek
Afrika Mainty 7 ora izay
Azia Afovoany sy Kaokazy 7 ora izay
Antsafa 19 ora izay